U-Luis de Góngora, oyena mntu ubalaseleyo kwi-Spanish culteranismo | Uncwadi lwangoku
Ibinzana likaLuis de Góngora.
U-Luis de Góngora (1561-1627) wayeyimbongi ebalaseleyo kunye nomdlali odlalayo, kunye nomnye wabameli ababalulekileyo beSpanish Age. Namhlanje ubonwa njengoyena mntu ukhupha eyona nto iphambili kwi-culteranismo, Uncwadi lwangoku olubizwa ngokuba yi-gongorism. Umsebenzi wakhe wemibongo ubonakaliswa ngokungoyiki kwaye, kwangaxeshanye, abe ngumhlaba.
Ngokukwanjalo, ulwimi lwakhe luthathwa njengenye yezona zikhanyiso ziqaqambe kwindaleko "yesihobe esithetha iSpanish". Ke, Umsebenzi wakhe wahlelwa "njengobuso bobabini besipili esinye", apho ukukhanya nobumnyama kunemvelaphi efanayo kwimibhalo yabo eyahlukeneyo.
1 Luis de Góngora: ubomi phakathi kweeleta
1.1 Iminyaka yokuqala yaphawulwa ngesiko eliqinileyo lamaKatolika
1.2 Ubutshaba neQuevedo
1.3 Ubuhle bemibongo yakhe
1.4 Umsebenzi omkhulu "omncinci"
1.5 Imibhalo yesandla kaLuis de Góngora
1.6 Phakathi kweeleta kunye neonethi
2 Ukuphela kwebali, ukuqala kwememori
2.1 Ilifa "eligcinwe lutshaba"
2.2 Ibango eliyimfuneko
Luis de Góngora: ubomi phakathi kweeleta
ULuis de Góngora y Argote wazalwa ngoJulayi 11, 1561, eCalle de las Pavas eCórdoba, eAndalusia. Wayeyinxalenye yeentsapho ezizezona zityebileyo kunye nolondolozo ngexesha kwiibhanki zaseGuadalquivir, enyanisweni, utata wakhe wayeyijaji yezinto ezathinjwa yiOfisi Engcwele.
Iminyaka yokuqala yaphawulwa ngesiko eliqinileyo lamaKatolika
U-Luis oselula uthathe ii-odolo ezincinci de wafikelela kwinqanaba le-canon yecawa enkulu yedolophu yakhe. Kwakhona, Wafumana iwonga elikhulu ngokuthatha isikhundla sokuba yiRoyal Chaplain ngo-1617 ngexesha lokugunyaziswa nguFelipe III. Yeyiphi, eyamkhokelela ekubeni aphile de kube li-1626 kwinkundla yaseMadrid ukuze akwazi ukwenza imisebenzi ehambelana nesihloko sakhe.
Emva kwexesha, wahamba iikhomishini ezahlukeneyo zebhunga lakhe phantse kuyo yonke iSpain. Uthatha ithuba kolu hambo lokudlula rhoqo e-Andalusia yakhe. Ngendlela enye, Ukutyelela ngokuzimisela iJaén, Navarra, Castilla, Cuenca, Salamanca kunye nee-nooks ezininzi kunye ne-crannies zoLuntu lwaseMadrid lwangoku.
Esinye sezahluko ezithethwe kakhulu ngobomi bale mbongi kunye nomlobi wemidlalo yayiyintshaba yakhe UFrancisco de Quevedo. Ngokuka-Góngora, "ugxa wakhe" okwexeshana (xa badibana kwiNkundla yaseValladolid) wazinikela ekumlingiseni. Ngapha koko, u-Luis de Góngora waya kude aqinisekise ukuba khange ayenze ekuhleni, kodwa wenza ngegama.
Ubuhle bemibongo yakhe
Emibini yemisebenzi yakhe ibonakala phakathi kweyona mibongo ibalaseleyo yesiSpanish. Oku kuyabulela kukuntsokotha abazifaka ngaphakathi kubo Ubulolo y Intsomi yePolyphemus kunye neGalatea. Zombini ezi zinto zibangela impikiswano enkulu ngexesha labo-hayi kuphela ngenxa yokuvela kwezafobe zabo ezihonjisiweyo- ikakhulu ngenxa yethoni yabo engamanyala, ekrwada kunye neentloni.
Ke ngoko, I-streak yakhe engathandekiyo ethandekayo yayihlala ikhona kuyo yonke imibhalo yakhe. Ukuhamba naye ukusuka kwimivumbo yokuqala efana nokubhalwa kwemibongo enikezelwe kwingcwaba lika-El Greco, uRodrigo Calderón kunye neNtsomi yePíramo kunye neLebe. Ukongeza, indalo yakhe yemibongo ibalasele kwiimpawu ezichazwe apha ngezantsi:
Ukusetyenziswa rhoqo kwe-baroque hyperbole engaqhelekanga.
Ukusetyenziswa rhoqo kwee-hyperbatones kunye nophuhliso olufanayo.
Isigama esikude ngokude kakhulu.
Umsebenzi omkhulu "omncinci"
Umsebenzi wakhe wemibongo uqokelelwe kwiibhloko ezimbini: imibongo ephambili nemibongo emincinci. Phakathi kwabo, ezothando zininzi ngathi Angelica kunye neMedoro, onesiphithiphithi, ombambazelayo kunye nethoni yakhe yobuqu yombali ingena nzulu kule ndawo iyaziwayo yokuphefumlelwa.
Imibhalo yesandla kaLuis de Góngora
ULuis de Góngora akazange apapashe nayiphi na imisebenzi yakhe ebomini bakhe; yayiyimibhalo-ngqangi eyadlulayo ukusuka kwesinye ukuya kwesinye. Ezibandakanya iincwadi zamaculo, iincwadi zothando kunye neengqungquthela, amaxesha amaninzi apapashwa ngaphandle kwemvume yakhe. Ngesinye isihlandlo - ngo-1623 - wazama ukupapasha ngokusesikweni inxenye yomsebenzi wakhe, kodwa wancama.
Enye yeetekisi awayegunyazisa ukusasazwa kwayo kwakubizwa njalo Umbhalo obhaliweyo weChacón, ebhalwe ngu-Antonio Chacón kwi-Count-Duke ye-Olivares. Apho, ukucaciswa kwesandla sikaGóngora ngokwakhe kwaqukwa kunye nobalo lwezibongo nganye.
Phakathi kweeleta kunye neonethi
Ukongeza, UGóngora wayengumchazi othembekileyo wengoma, umculo kunye neengoma zomculo, ngokunjalo iisonethi ngokuchukumisa burlesque. Uhlobo lwamva lokugqibela ludibanisa amabali aphikisayo, imicimbi yothando, kunye neengxoxo zefilosofi okanye zokuziphatha. Abanye babeneenjongo zomngcwabo, kodwa kunqabile ukuba balahle isatire.
Ngaphandle koku kungasentla, ukukhangela amaxabiso aphezulu obuhle kwakuyinxalenye yeengxaki zakhe. Ngeyona njongo yeeleta ezininzi yayikukuhlekisa ngamanenekazi abizwa ngokuba angqiba. Ngaphandle kokuhlasela ulangazelelo olunzulu lokungafikeleleki okanye umnqweno wokufumana ubutyebi obugqithisileyo. Ngokungafaniyo nemibongo emidala, ezona njongo zazo zazigxile ekukhuthazeni inguquko.
Ungayithenga le ncwadi apha: Ubunzima
Lo ngowona msebenzi ubalulekileyo kwikhathalogu yayo. Las ubulolo ngumceli mngeni kubukrelekrele babantu, unobangela weempikiswano ezingenakubalwa ngelo xesha. Umxholo wayo unika umbono oqinisekileyo wendalo, uthatha umsebenzi omele incopho yendlela "yegongoresque".
Ngakolunye uhlangothi, "ubuganga" bakhe bobuhle yayingunobangela wehlazo elikhulu ngenxa yeprofayile yakhe njengendoda "enesidima". Ukongeza, ingxoxo-mpikiswano yachukunyiswa yimvelaphi yomxholo wokuziphatha ngokwesini. Oko kukuthi, kwakhona umbhali wase-Andalusian watyhala iindibano zentlalo zexesha lakhe ukuya kumda.
Ukuphela kwebali, ukuqala kwememori
Iintsuku zokugqibela zikaLuis de Góngora azange zibubeke ubomi bendoda eyathi-inemibhalo yesandla kuphela-yaba nefuthe elibalulekileyo kwiileta zeCastilian. Oonobangela: Ukunyoluka kwezinye zezihlobo zakhe kunye neengxaki zokuwoyika zidibene ngokungenanceba ukumshiya edakumbile.
Ilifa "eligcinwe lutshaba"
Umsebenzi wakhe, ongagqitywanga kwiimeko ezininzi kwaye ungashicilelwanga, wawusemngciphekweni wokwenene wokulahleka kwindawo yokulibala. Ngokudabukisayo, ukungqubana okungagungqiyo neQuevedo ekuqaleni kwenza ukuba kube lula ukuhlangula nokukhusela ilifa lakhe. Ngenxa yale "ngxabano" bekukho iphepha elininzi elibhaliweyo elishiyelwe izizukulwana ezizayo.
"Imfazwe yokuhlutha" ekhutshwe phakathi kwaba babini ibonise indoda edibeneyo kunye nomthandi wobomi obulungileyo. Ukwengeza, U-Luis de Góngora uchazwa njengomntu onomdla onamandla malunga nokulwa kweenkomo kunye nokudlala amakhadi. Le yokugqibela yamenza ukuba angakholiswa ngabakhokeli bakhe bokuqala, abefundisi.
Okwangoku, imibongo yakhe kunye nomsebenzi wakhe wokubhala ngokubanzi- kubandakanya nokubandakanywa kwabo kumdlalo weqonga- bayaziwa ngokubaluleka kwabo. Y, Nangona umbhali wayengamboni ebomini, imibhalo yakhe ipapashwa rhoqo. Kanye njengoko kufanelekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » I-Biography » ULuis de Gongora